Iimpazamo zesetyhini ebhedini
Ukulala ngokwesibini, amadoda namabhinqa aphakamisa iimfuno ezininzi ukwenzela ukuba zonke zigcinwe. Kodwa ngelixa ubomi bukhula kangangokuthi amaxesha amaninzi umqalisi wobudlelwane bezesondo ngaba ngamadoda, kwaye abasetyhini basala ukulandela imithetho ecetywayo yomdlalo. Kodwa amadoda akahlali eyanelisekile kunye neqabane lakhe, kungakhathaliseki ukuba unzima kangakanani ukuzama ukuhlala unqwenelekayo. Iimpazamo zesibhinqa ebhedeni zingaba sisizathu sokugqitywa kobudlelwane. Kufuneka ufunde ukungazibopheli.
Abafazi bathanda kakhulu ukuthetha, ngaphambi kocansi, emva kwakhe nangona ngethuba. Amadoda ahlala engxoxweni ephazamisayo, ephazamisayo kwinkqubo kwaye ayinqanda ukugxila kumlingane kunye neemvakalelo zakhe. Loo ntokazi ongayazi ukuhlala ulala embhedeni uya kulahlwa ukulwa nobudlelwane.
2 Ukubalwa kwamabala
Ekubeni amadoda asebenza kakhudlwana ebomini bobulili, kuba yinto ebuthathaka, eyazi ukuba umntu unokusetyenziswa kwaye aqhutywe. Nangona kunjalo, akunakulungele ukukwenza. Imizamo yowesifazane ukusebenzisa indoda, ukudlala ngeemvakalelo zakhe kunye nesimo sengqondo kuwe ngoncedo lwezinto zokuzonwabisa zesini-ntlupheko - ubuninzi bobudenge. Amadoda ngokukhawuleza abhenca abafazi abafuna izibonelelo ngokulala, kwaye abaphatha kakubi kunezihenyukazi eziqhelekileyo.
3. I-candor excessive
Iimpazamo zesibhinqa ebhedini zihlukeneyo, enye yazo iphosakele, ukuba ayikho indawo. Ngokuqhelekileyo, abasetyhini, ngokufanelekileyo okanye ubudenge, baqala ukucinga ukuba isondo sele sisondeza ngokusondeleyo kumlingane okanye sinike ithuba lokuthetha ngokunyanisekileyo, kungakhathaliseki ukuba umntu ufuna ukuva uvumo lwakho okanye cha. Ezi zibandakanya izimvo malunga nentlobano yesondo kunye nokubhekisela kubo bonke abo babesandulana nabo ngaphambili, ukuthelekiswa kwamadoda kunye nabanye, amabali endlu yabo edlulileyo. Ngamanye amaxesha kungcono ukugcina umlomo wakho uvaliwe.
Amanye amantombazana ahlala exhalabele ukuba angamkholisa njani iqabane kwaye ayifumane ngokwabo, kodwa ngendlela abajonga ngayo ngenye indlela. Ngokuqhelekileyo abafazi bazama, ngoncedo lwezakhono eziqilileyo, ukufihla isisu kwisisu okanye cellulite kwipapa, becinga ukuba loo mntu akaxakekanga ngenkqubo, kodwa ngokujonga iingxaki zabo. Kodwa ukuba le ndoda yayinye ebhedeni elilodwa, kuqiqweni kucinga ukuba ukhululekile nayo - kokubili isithunzi sakho kunye nokungaphumeleli kwakho.
Iiphoso zabesetyhini ebhedeni zidla ngokubonakalayo kuphela kubantu. Abanye besetyhini bakholelwa ukuba ukulala ngokwesini akusiyo isizathu sokuzibeka ngokwakho. Kodwa amadoda angaphindwa nje kuphela kwaye angabi neenwele ezongezelelweyo kwii-ankle okanye kwindawo ye-bikini, njengephunga elimnandi, ukuhlamba impahla, njl njl.
Ubomi bezesondo buya kutshabalaliswa ngokutsha. Abasetyhini abasebenzayo bafana namadoda amaninzi. Ukuba ibhinqa likhetha enye ifowuni, enye iskripthi, ngoko kuba yinto ephazamisayo. Ukuxhamla, intsha eyona nto yokuziphatha ngokwesondo.
Ayikho imfihlakalo yokuba ngamanye amaxesha abantu bayayithanda xa ibhinqa lithatha isinyathelo. Owesifazane osebenzayo elele embhedeni - phantse ubunzima begolide. Nangona kunjalo, ungadluli. Ukuba uthatha inxaxheba yintloko, finyelela kwi-tepi kwaye uya kumxelela loo mntu nendlela yokwenza ngayo, ngoko, mhlawumbi, ulahlekelwa ngumlingane.
Ngokudabukisayo, amadoda awakulungele ukuxolela ukunganakwa ngesini. Ukuba awukhange ukhange kumntu, uya kuwujonga. Ngamanye amaxesha indoda ibona ukungakhathaleli kwindoda ngeendleko zakhe, ngamanye amaxesha ibhala kwi-frigidity. Kukho nawuphi na, iingxaki zesimo sengqondo azikwazi ukubangela into embi kumntu, kuphela ukuba kukho into eninzi phakathi kwakho kunokuba nje ngesondo.
Ngelishwa, iimpazamo zabesifazane ebhedeni zingaba sisizathu esibalulekileyo sokuhlukana. Kubaluleke kakhulu ukuba ubuhlobo phakathi kwamaqabane abubi kakhulu. Kodwa ungaxhomeki kwizinto ozenzayo ezingalunganga. Kungcono ukuba nguwe, ukuziphatha ngokwemvelo - ukuze ukwazi ukufumana umntu olala naye uya kuba uvuyo lwakho.
Ulwalamano olutshintsho emva kobuhlobo bobulili
Unyango lwe-colic kubantwana
Ukuba umntu akenzi isipho emva konyaka wobudlelwane: iingcebiso zokuthengisa
Indlela yokusinda ngokuqhawula umtshato: iingcebiso ezili-10 ze-psychologist ukuhlukana ngokulula nendoda
Iingcamango eziqhelekileyo malunga ne-thrush
Isitayela sama-80: iimpahla kunye nokwenza